Ahoana ny fomba hananganana fanentanana ara-barotra amin'ny Amazon amin'ny fanatanjahantena?
Amazon dia milina fikarohana lehibe indrindra eran-tany izay manampy ny mpampiasa hahita ny vokatra ilainy. Ny fahasamihafana fototra eo amin'ity milina fikarohana ity dia tsy ampiasaina amin'ny fampahalalana ankapobeny. Ireo mpampiasa mitady zavatra amin'ny Amazon dia manana fikasana hividy. Izany no mahatonga ny olona rehetra mifidy ny tsena Amazonia ho toy ny sehatra fivarotana ho an'ny vokatra azony, manao fanapahan-kevitra ara-barotra. Ary ny zava-misy, ny tranonkala dia manolotra fahafahana organika sy pad izay mamela marika mba hampanan-karena.
Araka ireo tarehin'ny indostria vao haingana tamin'ny taona lasa, dia nanao fanadihadiana 200 lavitrisa mahery isan-taona ny Amazon mpanjifa. Ny fikarohana iray hafa dia naneho fa maherin'ny 31% ny Amerikana no manomboka ny fikarohana ara-pivarotana amin'ny Amazon. Amin'ny herintaona dia mihoatra noho ny amin'ny Google.
Mampiseho ny herin'io sehatra mivarotra io sy ny anjara asany amin'ny orinasa ecommerce ankehitriny. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hahatonga ny vokatra ho hita mibaribary eo anoloan'ny mpanjifa mety hametraka Amazon SEM (sehatry ny fikarohana finday).
Ny maha-zava-dehibe ny fanatsarana ny teny fanalahidy amin'ny Amazon
Tahaka ny tradisionan'ny fikarohana nentim-paharazana, Amazon dia manaparitaka ireo pejin-kaonty amin'ny teny fikarohana mba hanomezana ny mpampiasa ny valin'ny fikarohana indrindra. Midika izany fa ny votoaty manan-danja iray manan-danja dia tsy maintsy manana ny fanavaozana Amazon.
Maro ireo fitaovana fikarohana matihanina amin'ny aterineto izay afaka manome anao ny manan-danja amin'ny fikarohana momba ny fikarohana. Na izany aza, tokony hiantehitra amin'ny tenanao lavitry ny fitaovana rehetra koa ianao afaka manome anao ny teny fohy tsy mifanentana amin'ny fifaninanana..Mba hamaritana ny volan'ny fikarohana voalazan'ny teny fanalahidy, afaka mampiasa fitaovana toy ny Google Keyword Planner, Amazon Retailer Analytics, ary Amazon Marketing Services PPC ianao. Amin'izany fomba izany, manam-pahaizana momba an'i Amazon no manamafy fa azo atao ny mitady ny fikarohana voalanjalanja amin'ny mpanjifa.
Amazon dia manome sehatra maromaro miserana izay azonao ampidirina am-pihetsiketsehana ny dikan-teny sy ny fikarohana voalanjalanja. Ireo fizarana ireo dia ahitana lohateny, famaritana sy bala.
Ahoana no mety ho fiantraikan'ny varotra Amazon?
Mifanohitra amin'ny fitaovam-pikarohana nentim-paharazana, i Amazon dia manaiky ny habetsahan'ny fivarotana mpividy tsirairay mba hanaovana fotoana voafaritra. Raha tokony hanorina rohy toy ny amin'ny fikarohana fikarohana tradisionana, ny algorithm amin'ny algorithm dia mifototra amin'ny famokarana mivantana. Azony hazavaina amin'ny tanjona ambaran'ny Amazon mba hahazoana tombony betsaka araka izay tratra. Izany no mahatonga ny algorithm omena algorithm amin'ny alàlan'ny alàlan'ny tsindrin-tsakafo dia mampihetsi-po ireo zavatra sarobidy kokoa. Koa satria ny vokatra avy amin'ny famokarana maimaim-poana dia napetraka ao amin'ny pejin'ny TOP Amazon amin'ny valin'ny fikarohana, dia misarika tsindry bebe kokoa izy ireo.
Izany no antony mahatonga ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanatsarana ny fizotry ny organika amin'ny Amazon amin'ny alalan'ny lisitra fanamafisana izay napetraka ao amin'ny TOP ary mitondra ny fivarotana betsaka indrindra.
Fomba hafa azo ampiasaina amin'ny fananganana ny laharana amin'ny Amazon SERP dia ny hanomezana vidiny fifaninanana. Raha manao izany ianao, dia hanintona mpividy kokoa mpanjifa ary mamorona tantara malaza amin'ny Amazon.
Ankoatra izany, raha mpikambana iray ao Amazonia ianao, ny vokatrao dia hividy bebe kokoa satria ny mpivarotra dia afaka mahazo azy ao anatin'ny roa andro ary koa mahazo onitra ho an'ny fahavoazana Source .